China imixube eqingqiweyo yabavelisi beThermoplastics kunye nabathengisi | Beihai Fibreglass
I-1 isekwe kwi-arhente yokuhlangana kwe-silane kunye nokuyilwa okukhethekileyo, okuhambelana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kweemoto, isixhobo sasekhaya, iivalves, indawo yokuhlala impompo, ukumelana neekhemikhali kunye nezixhobo zemidlalo.
Imicu eqingqiweyo yeThermoplastic isekwe kwiarhente yokuhlangana kwe-silane kunye nolwakhiwo olukhethekileyo lobungakanani, oluhambelana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
Ukuma kwe-E-Glass okususiweyo kwe-thermoplastic kuyaziwa ngokunyaniseka kwe-strand egqibeleleyo, ukuhamba ngokugqwesileyo kunye nokulungiswa kwepropathi, ukuhambisa iipropathi zoomatshini ezigqwesileyo kunye nomgangatho ophezulu womphezulu kwimveliso egqityiweyo.
I-arhente yokuhlangana esekwe eSilane ehambisa uninzi lweepropathi zokulinganisela.
2.Special sizing formaulation ehambisa ukubopha okuhle phakathi kweentambo ezinqunqiweyo kunye nencindi yematriki
Ingqibelelo 3.Excellent kunye flowability owomileyo, ukukwazi ukungunda elungileyo kunye kwiintsali
Iipropati 4.Excellent ngoomatshini kunye nemeko kumphezulu weemveliso edityanisiweyo
Iinkqubo zokukhupha kunye nokufaka inaliti
Ukuqiniswa (iglasi yefayibha ecoliweyo) kunye ne-resin ye-thermoplastic ixutywe kwi-extruder. Emva kokupholisa, i-ther iyanqunyulwa kwiipellets eziqinisiweyo ze-thermoplatic. Iipellets zondliwa kumatshini wokubumba ngenaliti ukwenza izinto ezigqityiweyo.
I-E-Glass Chopped Strands for Thermoplastics zisetyenziswa ikakhulu kwinaliti kunye neenkqubo zokubumba zokucinezela kunye nokusetyenziswa kwayo kokuphela kokubandakanya kubandakanya izithuthi, isixhobo sasekhaya, iivelufa, izindlu zempompo, ukumelana nokubola kwemichiza kunye nezixhobo zemidlalo.
Chop Ubude, mm
Ukumelana neHydrolysis, ubumnandi obubalaseleyo
Filament Ububanzi, μm
Ubukhulu Ububanzi (%)
Umxholo wokufuma (%)
Chop ubude (mm)
Egqithileyo Imisonto emanzi egawuliweyo
Imisonto egawuliweyo yePa
Imisonto eqingqiweyo ye-Pa6
Imisonto egawuliweyo yePp